Mendocino सौर ईन्जिन - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> मोटर्स >> इलेक्ट्रिक मोटर्स >> Mendocino सौर ईन्जिन
Mendocino सौर ईन्जिन
El मेन्डोसिनो इञ्जिन एक छ बिजुली मोटर त्यो चुम्बकीय रूपमा levitates र सौर ऊर्जा को उपयोग गर्दछ। ईन्जिनको सुन्दरताले यसलाई हावामा तैरिरहेको देखिरहेको छ। यो वास्तवमै जादु जस्तो देखिन्छ।
दुई फरक भागहरु द्वारा बनाईएको, चुम्बकीय प्रणाली जसले यसलाई लेभिट बनाउँदछ र मोटरको इलेक्ट्रोमेकानिकल भाग जसले यसलाई मोड्छ। मोटरमा अक्षको वरिपरि चार अनुहार (वर्ग खण्ड) हुन्छन्, जुन रोटर गठन गर्दछ। रोटर ब्लकमा कोइलाको दुई सेट र प्रत्येक छेउमा सौर सेल जोडिएको छ। शाफ्ट तेर्सो छ र प्रत्येक छेउमा चुम्बक छ।
आधारमा म्याग्नेटको अर्को सेटको साथ विकृतिको शक्ति द्वारा शाफ्टमा म्याग्नेटहरूले यसलाई लेभेट बनाउँछ। त्यहाँ अतिरिक्त चुम्बक छ जुन रोटर ब्लक मुनि अवस्थित छ र रोटर र मोटर आवाश्यक हुनको लागि चुम्बकीय क्षेत्र प्रदान गर्दछ।
चरणहरूका साथ वेब एक mendocino चुंबकीय सौर मोटर निर्माण
क्लासिक को एक उदाहरण मेन्डोजा इञ्जिन.
यूट्यूबमा धेरै भिडियोहरू छन्, तर म तपाईंलाई दुईवटा छोड्दछु जुन मलाई लाग्न लायकको छ।
Mendocino सौर ईन्जिन लेगो भागहरूको साथ बनेको थियो
चुम्बकीय हिसाबले सौर मोटर
यस प्रकारको ईन्जिनको साथ कुनै अनुभव छ?
Comments मोटर सौर Mendocino on मा टिप्पणीहरु
नोभेम्बर १२, २०२० बिहान १::18
नमस्कार, भिडियो सुपर छ, म एउटा बनाउन चाहान्छु, तर के म कुण्डलको कतिवटा घुम्ती छ भन्न सक्छु?
मे २०, २०१ 7:०:2016 अपराह्न
हेलो, मलाई थाहा हुनु पर्छ के सामग्रीहरू छन् जुन मेन्डोजाको असेंब्ली बनाउनको लागि आवश्यक छ, तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद